08/08/13 ~ MOBILE IT NEW
DX ToolBox Update V3.3.0 (2013-08-08)
10:14 PM Android Application No comments
Android ဖုန်းနဲ့ Table တွေအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် DX ToolBox update လေးပါ။
မိမိ phone နဲ့ Table ကိုအမြဲတမ်းပေါ့ပါး နေအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိဖုန်းဟာ Root လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ App လေးကို အသုံးပြုပြီ ကိုယ်မလိုချင်းတဲ့ System App တွေကို
အလွယ်တကူ Uninstall လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Flash light , File Manager တို့ ပါဝင်ပြီ APP များကို Move To SD လည်းရွေနိုင်ပါတယ်။
ပြီတော့ မိမိဖုန်းထဲက Application တွေကိုလဲ Update အလွယ်တကူလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Process Manager က မလိုအပ်တဲ့ Application တွေ Run နေတာကိုထိန်းချုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
တခြား လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Android ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application လေးတစ်ခုပါ။
Facebook တွင် မဟုတ်တာတင်ရင် မဆဲပါနှင့် Report သာလုပ်လိုက်ပါ
9:05 PM နည်းပညာများ, ဗဟုသုတများ No comments
Facebook တို့ Blogger တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျနဲ့ လည်ပတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုက်တာတင်ခွင့်၊ ရေးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများထင်နေကြသလိုမျိုး စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့တော့ မဟုတ်ပါ။ လူတစ်ယောက် တင်တဲ့အကြောင်းအရာ၊ ဓာတ်ပုံ စတာတွေဟာ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ငြိစွန်းရင်၊ လူမျိုးရေးဘာသာရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ရင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိုင်းစိုင်းမှုတွေပါရင်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုရင် Report လုပ်ပြီး ဖျက်ဖို့တောင်းဆိုနိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အထက်ပါအကြောင်းအရာမျိုးတွေ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ Facebook မှာ တင်တဲ့အခါမှာ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဆဲနေမယ့် အစား Facebook ဆီ Report ၀ိုင်းတင်ပြီး ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ Report တင်တဲ့သူများရင် Facebook က ဖျက်ပေးမှာ အသေအချာပါပဲ။ Facebook ရဲ့ အယူအဆကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အများက လက်မခံရင် သူတို့ဘက်က ဖျက်ပေးမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ပုံမှာပြထားသလိုမျိုး သူတင်လိုက်တဲ့ Status ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ ကြက်ခြေခတ် ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး Report/Mark as Spam ကို ရွေးပေးပါ။ အဲဒီအခါမှာ ပုံ(၂)မှာ ပြထားသလိုမျိုး Thanks for Your Help ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာပါတဲ့ Report ဆိုတဲ့ Link ကို ထပ်နှိပ်ပါ။
Facebook ကို လျှင်မြန်စွာသုံးနိုင်မယ့် Shortcut key များ
9:03 PM နည်းပညာများ, ဗဟုသုတများ No comments
တကယ်သုံးလို့ရပါတယ်။ ပုံမှာ click ထောက်ပြီး Cap lock ဖွင့် L နှိပ်လိုက် တာ ပုံကို Like လုပ်မယ် မလုပ်မယ် confirm ဖြစ်အောင် နောက် တစ်ခါ ထပ်မေးပါတယ်။ Don't ask me again မှာ အမှန်ခြစ်ထားလိုက် ရင် နောက် ဘယ်ပုံကိုပဲ ဖွင့်ပြီး ကြည့်ကြည့် မောက်စ်နဲ့ ရှာ Like စရာ မလိုပဲ ကီးဘုတ် L ကီးနဲ့ Like နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook မှာ Short Cut ကီးများစွာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒါကတော့ အများစု အသုံးပြုနေကြတဲ့ key တွေပါ။
အခြားသော Short cut ကီးများကိုလည်း ဆိုင်ရာရာ အသုံးပြုလို့ရပြီး စာဖတ်သူတို့ ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းမလိုပဲ.. Gtalk & Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်း
8:51 PM internet, နည်းပညာများ No comments
မင်္ဂလာပါ ကျနော်ကတော့ Myanmar IT Helper ပါ ဒီနည်းလေးကတော့..အရင်က.. Technological Villa မှာ.တင်ပေးဘူးပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်.. သိပ်မရခဲ့ပါဘူး.။ ခုတော့.. ဘာမှ.စိတ်မပူနဲ့တော့.. ဖုန်းနာပါတ်တောင်းလည်း.ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး.. Virtual phone number လေးသုံးပြီး.. Google နဲ့ Facebook ကို..လှည့်စားလိုက်ကြရအောင်.. ^_^
ပထမဆုံး..Gmail account အသစ်ဖွင့်နည်းလေး..ပြောလိုက်ကြရအောင်..
ထုံစံအတိုင်း.. အကောင့်သစ်ဖွင့်ချင်ရင် www.gmail.com ကိုသွား.. ညာဘက်က.. Create New Account ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
Form ဖြည့်ဖို့ကျလာရင်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်နဲ့... password တွေပေးပြီးဖြည့်လိုက်ပါ...။
Facebook တွင် မဟုတ်တာတင်ရင် မဆဲပါနှင့် Report သာလု...
Facebook ကို လျှင်မြန်စွာသုံးနိုင်မယ့် Shortcut ke...